on March 02, 2016 Related - Articles Aye Win (Lamin Tayar)
သူ့ စာတွေကို ဖတ်ပြီး သူ့စာတွေနဲ့ ကိုယ်တို့ ကြီးခဲ့ရတာလေ။ သူ့ အရေးအသားတွေကို ကြိုက်လွန်းလို့ အတု ခိုးခဲ့တယ်။ က လေးဘဝကတည်းက သူ့စာတွေနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ 'မောင်သာရ' ကို ကြီးမှ လူချင်းသိခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်ထောင်ကနေ ထွက်ပြီး လမင်းတရာ လှုပ်ရှားတော့မှ သူ့နဲ့ သိခွင့်ကြုံရတယ်။
"ဒီမှာ… အေးဝင်းရ၊ ခုခေတ်လူငယ်တွေက စာမဖတ်ကြတာ များတယ်။ မောင်သာရ ဆိုတာ ဘာမှန်း မသိကြတော့ဘူး……" တဲ့။
" ငါက.. realism ကို ရေးတာ၊ လူတွေအကြောင်းကို ရေးတာ။ Taxi driver အကြောင်း၊ ငါးစိမ်းသည်အကြောင်း၊ တောပြန် လက်နက်ချအကြောင်း စသဖြင့်ပေါ့ကွာ…….။ ခု ဗမာပြည်နဲ့ ဝေးနေတော့ အဲဒီကအကြောင်းတွေ သိတ်မသိတော့ဘူး။ သိပ် မသိတော့ဘူးဆိုတာ သူများပြောတာ၊ စာတွေထဲ ဖတ်ရတာလောက်ပဲ သိတော့တာ ပေါ့ကွာ။ ငါအခု ဒီမှာနေတယ်။ ဒီကလူ တွေပဲ ငါမြင်တော့ ဒီကအကြောင်းပဲ ရေးရတာ…. "
'ကိုဝင်းငြိမ်းကတော့ သူ့မဂ္ဂဇင်းမှာ ထည့်ပေးရှာပါတယ်။ ကောလိပ်ကျောင်းသူလေးတွေ ဖော်ချွတ်ပြီးကတဲ့ club တွေမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ကျောင်းစရိတ်ရှာတဲ့အကြောင်းရေးတာ… ထုတ်ဝေသူတယောက်က မထုတ်ရဲဘူးကွ…. '
ဗမာပြည်မှာ ထုတ်တဲ့ သူ့ဝတ္ထုတိုတွေ ၄ - ၅ ခု ပေါင်းထားတဲ့ စာအုပ်အကြောင်း ပြောတယ်။
'ဘယ်မှာလဲ - ပေးလေ.. ' ဆိုတော့
'..မရှိတော့ဘူး၊ ၄ - ၅ နှစ် ရှိပြီပဲ မင်းနောက်ကျသွားပြီ…' တဲ့။ ခဏနေတော့ မော်ကြီးကို ငါမမှီလို့ ငါ့ကို တခုကူညီစမ်းဆိုပြီး သူ့အခန်းထဲက စင်ပေါ်က စာအုပ်တအုပ်ကို ယူခိုင်းပြီး ပေးတယ်။
'လက်မှတ် ထိုးအုန်းလေ…' ပြောတော့၊
'..မထိုးဘူး မင်းတို့ နှစ်ယောက် လှည့်ဖတ်ကြ….' ဆိုပဲ…။
စိစစ်ရုံးက ငနဲတွေက 'ဟာ… ဆရာ့ခေါင်းစဉ်ကြီးကလဲ' ဆိုရင် 'ဟေ့ကောင် ဒီလိုဆိုရင်ကော' ဆိုပြီး တခု ထပ်ပေးတယ်။ 'အင်း .. ဒါလဲ ဘာထူးလဲ ခုန ဟာနဲ့…' လို့ ဆိုလာရင်…၊ 'ဒါရောကွ.. ' ဆိုပြီး သူ့အိပ်ကပ်ထဲကနေ မျက်လှည့်ဆရာ အိတ်လို တခုပြီး တခု လာထုတ်တယ်။
တခုပြီးတခု ဈေးဆစ်ကြတာ။ - ဇာတ်လမ်း -ဆိုတာလေးကို 'မုန့်လုံးစက္ကူကပ်' နောက်မှာ ထည့်ပေးလိုက်မှ စိစစ်ရေးက ဘဝင်ကျသွားတယ် လို့ သူပြောပြတယ်။
သူနဲ့ အခုတခေါက် ပြန်တွေ့တော့ သူ့ကို ကိုယ်က ပြောပြတယ်။ 'ဆရာရယ်… ဆရာပြောတဲ့ စကားတခု ကျနော် ဒီနေ့ထိ အမှတ်ရနေတုန်း၊ ဒီစကားဟာ အသုံးလည်း တည့်နေတုန်း….' ဆိုတော့၊ 'ဘာလဲကွ..'တဲ့။ 'သြော်… ဆရာပြောတာလေ…...ဟေ့ကောင် မောင်အေးဝင်း မင်း မှတ်ထား.. အရက်ဆိုင်မှာ ဘယ်တော့မှ ထမင်းမစားနဲ့၊ ထမင်းဆိုင်မှာ ဘယ်တော့မှ အရက်မသောက်နဲ့…..' တဲ့။ သူက အရက် မသောက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အစားကောင်းကောင်း စားတတ်တော့ အဲဒီကောက်ချက် ကို သူ ထုတ်ထားပုံ ရတယ်။ အဲဒါပြန်ပြောပြတော့ သူ ပြုံးပြီး 'မင်းဟာ ကြံဖန် မှတ်ထားတတ်တယ်ကွာ' တဲ့။